Dagaal ka dhacay Gobolka jubbada Hoose & khasaaro ka dhashay – Banaadir Times
Dagaal ka dhacay Gobolka jubbada Hoose & khasaaro ka dhashay
By banaadir 29th June 2021 45 No comment
Dagaalka oo u dhaxeeyay Ciidamo ka tirsan kuwa dowlad Goboleedka Jubbaland iyo Xubno kamid ah Al-Shabaab ayaa waxaa uu ka dhacay degmada Afmadow oo ka tirsan Gobolka Jubbada Hoose.
Dagaalka ayaa waxaa uu yimid kadib markii sida la sheegay Xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab ay weerareen Saldhiga Ciidamada daraawiishta Jubbaland ku leeyihiin degmada Afmadow, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal socday in ka badan saacad, kaas oo geystay khasaaro kala duwan.
Wararka dagaalka laga helay ayaa sheegaya in hal askari oo ka tirsan Ciidamada Jubaland uu ku dhintay mid kalena uu ku dhaawacmay, waxaana saraakiil ka tirsan Maamulka Jubbaland ay sheegen inay iska difaaceen weerarka Al-Shabaab.
Dadka ku nool degmada Afmadow qaarkood ayaa waxaa ay sheegeen in mararka qaar ay xaafadaha degmada kusoo dhaceen hubka noocyadiisa kala duwan oo ay isku adeegsanayeen labada dhinac, balse aan wax khasaaro ah kasoo gaarin dadka Shacabka ah.
Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya degmada Afmadow ee Gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ay sheegayaan in xaalada ay tahay mid degan, hayeeshee Ciidamada daraawiishta Jubbaland ay dhaq dhaqaaqyo Ciidan ka wadaan duleedka degmadaas.
Dowladda oo soo bandhigtay Ciidamo la dagaalama Al-Shabaab
Laftagareen oo Bulshada Waajid kala hadlay furitaanka wadooyinka u xiran Al-Shabaab
By banaadir 20th June 2021